एक महिनापछि फेरि सी-मोदी भेट गर्दै, के होला छलफल ? – " सुलभ खबर "
एक महिनापछि फेरि सी-मोदी भेट गर्दै, के होला छलफल ?
काठमाडौं । एक महिनापछि फेरि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटवार्ता गर्दैछन् । ११ औं ब्रिक्स (ब्राजिल-रसिया-इण्डिया-चाइन-साउथ अफ्रिका) सम्मेलनका क्रममा ब्राजिल पुगेका दुई राष्ट्र प्रमुखबीच बुधबार भेट हुने भएको हो । पाँचवटा तीव्र आर्थिक प्रगति गर्ने मुलुकहरु मिलेर ब्रिक्स गठन गरिएको थियो ।
यसअघि अक्टोबर ११ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको चेन्नइस्थित ममुल्लापुरममा दोस्रो अनौपचारिक भेट गरेका थिए । त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री चीन गएको अवसरमा बेइजिङमा पहिलो अनौपचारिक भेट गरेका थिए ।एक महिनापछि उनीहरुले फेरि ब्राजिलमा भइरहेको ११ औं ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भेट गर्न लागेका हुन् । बुधबार ‘साइडलाइन’ भेटका क्रममा दुई राष्ट्र प्रमुखबीच यसअघि छलफल भएका विषयलाई पूर्णता दिने विषयमा फेरि छलफल हुने बताइएको छ ।
यसअघि चेन्नइमा भएको भेटका क्रममा दुई राष्ट्र प्रमुखबीच भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सिथारमन र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री ह्यु चुनहुवाको नेतृत्वमा व्यापार लगानी र विस्तारका विषयमा छलफल गर्न समिति गठन गर्ने समझदारी भएको थियो । आज हुने भेटमा पनि यही विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्‍ने छलफल हुने जनाइएको छ ।
चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ५० बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । चीनले भारतलाई क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदार (रेसेप) को समझदारी गर्ने आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले भने उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गरेमा चिनियाँ उत्पादनले भारतीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने र थप व्यापार घाटा बढ्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।
चीन र भारतले ह्यु-सीथारमन समिति गठन गर्ने सहमति गरे पनि पहिलो बैठक कहिले बस्ने भन्‍ने निर्णय गरिसकेको छैन । यस विषयमा पनि आजको भेटका क्रममा छलफल हुने बताइएको छ ।
उक्त सम्मेलनकै दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि भेट गर्ने छन् । यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलन आतंकवाद विरोधी सहकार्य गर्ने संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा जोड दिइनेछ ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिएको यो छठौं पटक हो । उनले सन् २०१४ देखि निरन्तर ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।